China Acetonitrile Kugadzira uye Fekitori | Vakasununguka
CAS Kwete: 75-05-8
Musika: Europe / India
Chitarisiko: Transparent mvura
Ruvara (Pt-Co): 10 max
Amoniya (mg / kg): 6max
150kg / dhiramu, 12Mt / FCL kana 20mt / FCL
UN No. 1688, Kirasi: 3, Kurongedza boka: II
Kuongorora kwemakemikari uye kuongorora kwechiridzwa. Acetonitrile inogadzira organic uye solvent kune yakatetepa yakatetepa chromatography, pepa chromatography, spectroscopic uye polarographic kuongororwa mumakore apfuura. Sezvo yakachena kuchena acetonitrile isingatore ultraviolet mwenje munzvimbo ye200nm kusvika 400nm, iri kugadzirwa seye solvent yeakakwira kuita kwemvura chromatography (HPLC) ine hunyoro hwe10-9.
Acetonitrile chinhu chinoshandiswa zvakanyanya, icho chinonyanya kushandiswa mukudzora distillation kupatsanura butadiene kubva kuC4 mahydrocarbon. Acetonitrile inoshandiswawo kupatsanura mamwe mahydrocarbon, sekuparadzaniswa kwepropylene, isoprene uye methylacetylene kubva kuzvikamu zvehydrocarbon. Acetonitrile inoshandiswawo kumwe kupatsanurwa kwakakosha, senge kubviswa kwemafuta acids kubva mumafuta emuriwo uye cod chiropa mafuta, kuitira kuti mafuta anorapwa ave akareruka, akachena, uye hwema hunovandudzwa, nepo vhitamini zvemukati zvinoramba zvisina kuchinja. Acetonitrile zvakare inoshandiswa zvakanyanya senge solvent mumushonga, mishonga yekuuraya zvipuka, machira uye epurasitiki madhipatimendi.
Erm Pakati pezvakagadzirwa zvemushonga uye mishonga yekuuraya zvipuka.Acetonitrile inogona kushandiswa kugadzira epakati yemishonga yakawanda uye mishonga yekuuraya zvipuka. Mukurapa, inoshandiswa kugadzira nhepfenyuro yezvakakosha zvemishonga yepakati senge vhitamini B1, metronidazole, ethambutol, aminopteridine, adenine uye diphenyl chikosoro; mune mishonga yekuuraya zvipuka, inoshandiswa kugadzira pyrethroid zvipembenene, ethoxycarb uye zvimwe zvipembenene zvepakati.
EmSemiconductor cleaner. Acetonitrile is organic solvent ine yakasimba polarity. Iyo ine yakanaka solubility yegirisi, inorganic munyu, organic chinhu uye yakakwira mamorekuru mukomboni. Inogona kuchenesa girisi, wakisi, zvigunwe, zvinokanganisa mumiriri uye kuyerera kwakasara pane silicon wafer. Naizvozvo, yakachena kuchena acetonitrile inogona kushandiswa se semiconductor yekuchenesa mumiriri. ApplicationsZvimwe zvinoshandiswa: Pamusoro pekushandisa pamusoro, acetonitrile inogona zvakare kushandiswa senge mbishi zvinhu zve organic synthesis, chinokonzeresa kana chikamu chekushandura simbi yakaoma gadziriso. Uye zvakare, acetonitrile inoshandiswawo mukucheka machira uye kuputira machira, uye zvakare inosimudzira inogadzikana yechlorinated solvent
☑ Kambani yeHurumende ine makore anopfuura makumi matatu chiitiko;
☑ Yakakwira HSE standard fekitori;
☑ Chigadzirwa chinotenderwa neMishonga yeMakemikari mazhinji muEurope;
☑ Giredhi remagetsi rinowanikwa
Zvadaro: 2,6-Diethyl-4-methylaniline (DEMA)